စျေးပေါ Eurostar ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
စျေးပေါ Eurostar ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ
နေအိမ် > စျေးပေါ Eurostar ရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ
ဤတွင်သင်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် စျေးပေါ Eurostar ရထားလက်မှတ်တွေ နှင့် Eurostar ခရီးသွားစျေးနှုန်းများ နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ.
ခေါင်းစဉ်များ: 1. ရထား Highlights အားဖြင့် Eurostar
2. Eurostar အကြောင်း 3. စျေးပေါသော Eurostar ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
4. Eurostar လက်မှတ်တွေဘယ်လောက်ကျလဲ 5. Eurostar ရထားစီးတာဘာကြောင့်ပိုကောင်းတာလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ
6. Standard အကြားခြားနားချက်များကဘာတွေလဲ, Eurostar မှ Standard Premier နှင့် Business Premier 7. Eurostar မှာပေးသွင်းမှုရှိပါသလား
8. ဘယ်လောက်ကြာမထွက်ခွာမီရောက်ရှိရန် 9. Eurostar ရထားဇယားကဘာလဲ
10. ဘယ်ဘူတာများကို Eurostar မှတာဝန်ယူသည် 11. Eurostar မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ရထား Highlights အားဖြင့် Eurostar
Eurostar ကုမ္ပဏီကိုနို ၀ င်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့သည် 1994
ဥရောပတွင်အမြန်ဆုံးရထားများထဲမှတစ်ခုမှာ Eurostar ဖြစ်သည်, Eurostar အမြန်နှုန်းသည်တစ်နာရီလျှင် 320km ဖြစ်သည်
Eurostar Channel ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည် 50.45 ကီလိုမီတာရှည်လျားသို့မဟုတ် 31.5 မိုင်. ဒါကညီမျှပါတယ် 169 Eiffel Towers တစ်ခုချင်းစီကတခြားထိပ်ပေါ်မှာ stacked
2Eurostar ပေါ်ရှိ Paris နှင့် London တို့အကြားခရီးသွားချိန် h15
ယူရိုကနေဥရောပကိုသွားတဲ့ Eurostar နဲ့ခရီးသွားတဲ့အခါ, မင်းရတယ် 1 နောက်ကျောအချိန်အတွက်နာရီ
Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ဖြတ်ကူးကြာပါသည် 35 မိနစ်များ
Eurostar မြန်နှုန်းမြင့်ရထားသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနောက်ဥရောပကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ London နှင့် Kent သို့ဆက်သွယ်သည်, ဥရောပမှဆက်သွယ်မှုများသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ပါရီမြို့နှင့် Lille ဖြစ်သည်, ဘရပ်ဆဲလ်, နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ Antwerp, နယ်သာလန်ရှိရိုတာဒမ်နှင့်အမ်စတာဒမ်. လည်း, လန်ဒန်ကနေ Disneyland Paris အထိရထားနဲ့သွားနိုင်ပါတယ် (Marne La Vallee Chessy ရထားဘူတာ) လည်း ရာသီအလိုက်နေရာများ ထိုကဲ့သို့သောပြင်သစ် Alps အတွက် Marseilles နှင့် Moutiers အဖြစ်ပြင်သစ်၌တည်၏. Eurostar ရထားအားလုံး English Channel ကို Channel Tunnel မှတဆင့်ဖြတ်ကူးသည်.
အဆိုပါ Eurostar ရထားဝန်ဆောင်မှု ရထားတွေတက်လာတယ် 320 မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများပေါ်တွင်တစ်နာရီကီလိုမီတာရှိသည်. Eurostar စတင်လည်ပတ်ကတည်းက 1994, Eurostar ခရီးစဉ်များအကြားခရီးစဉ်များလျှော့ချရန်ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ယူကေတွင်လိုင်းအသစ်များတည်ဆောက်ထားသည်. အဆင့်နှစ်ဆင့် Channel Tunnel Rail Link စီမံကိန်းကိုနို ၀ င်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ပြီးစီးခဲ့သည် 2007, Eurostar ၏ London Terminal သည် Waterloo International မှပြောင်းရွှေ့သောအခါ လန်ဒန်စိန့် Pancras အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘူတာရုံ.
ကိုသွားပါ ရထား Homepage ကို Save လုပ်ပါ သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ဤဝစ်ဂျက်ကိုသုံးပါ Eurostar အတွက်လက်မှတ်တွေရထားတယ်
စျေးပေါသော Eurostar ရထားလက်မှတ်ရရန်ထိပ်တန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ဂဏန်း 1: သင်၏ Eurostar လက်မှတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်မှာထားပါ
Eurostar ရထားလက်မှတ်တွေ အကြားရရှိနိုင်ပါသည်3လမှ6ရထားထွက်ခွာသွား၏လပေါင်းများစွာ. ရထားလက်မှတ်များကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်သင်သည်စျေးအသက်သာဆုံးလက်မှတ်ရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် Eurostar ရထားလက်မှတ်သည်အကန့်အသတ်ရှိကြောင်းသေချာစေပါ. Eurostar ကသင်ခရီးသွားသည့်နေ့နှင့်နီးသည်နှင့်အမျှလက်မှတ်ဈေးနှုန်းများတက်လာသည်ကိုလေ့ကျင့်သည်, ဒါနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူမှုတွင်ငွေစုပါ, ကြိုတင်မဲအတွက်တတ်နိုင်သမျှအမိန့်.
ဂဏန်း 2: Off-peak ကာလများအတွင်း Eurostar ဖြင့်ခရီးသွားခြင်း
Eurostar, ပိတ်ချိန်များအတွင်းလက်မှတ်စျေးနှုန်းချိုသာသည်, ရက်သတ္တပတ်၏အစမှာ, နှင့်တစ်နေ့တာအတွင်း. ရက်သတ္တပတ်၏အလယ်ရထားခရီးစဉ် (အင်္ဂါနေ့, ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ကြာသပတေးနေ့) မကြာခဏစျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းများပေးထားပါတယ်. အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများအတွက်, Eurostar ကိုမနက်အစောပိုင်းနှင့်တစ်ပတ်အတွင်း၌မယူပါနှင့် (အများအပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက်ကြောင့်), သောကြာနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းများတွင် Eurostar စီးနင်းခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ (တနင်္ဂနွေ getaways များအတွက်အဆင်သင့်), စဉ်အတွင်း အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင်လည်းဖြစ်သည် Eurostar skyrocket ၏စျေးနှုန်းများ.
ဂဏန်း 3: သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားကိုသေချာသည့်အခါ Eurostar အတွက်သင်၏လက်မှတ်များကိုမှာယူပါ
Eurostar ရထားဝန်ဆောင်မှုများသည် ၀ ယ်လိုအားအလွန်များနေပြီး၊, Eurostar ရထားလမ်းကုမ္ပဏီသာအင်္ဂလိပ်ချန်နယ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွင်ရထားများလည်ပတ်သည်, ထိုကွောငျ့, ယှဉ်ပြိုင်မှုလည်းမရှိဘူး. Eurostar သည်အင်္ဂလန်နှင့်အနောက်ဥရောပအကြားရှိလမ်းကြောင်းများတွင်တစ်ခုတည်းသောရထားအော်ပရေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရထားလက်မှတ်ကန့်သတ်ချက်အချို့ချမှတ်ထားသည်. Business Premier အမျိုးအစားရထားလက်မှတ်များကိုသာလဲလှယ်နိုင်သည်, အခြားရထားလက်မှတ်များကိုလဲလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်အမ်း။ မရပါ, သို့သော်သင်၏ရထားလက်မှတ်များကိုဒုတိယအရောင်းနိုင်သည့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖိုရမ်များရှိသည်. ဒါကြောင့်, အဘို့အတစ် ဦး ကရထားထောက်ခံချက် Save Eurostar ခရီးသွား သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားကိုသေချာသည့်အခါစာအုပ်ဆိုင်ဖြစ်သည်.
ဂဏန်း 4: သင်၏ Eurostar လက်မှတ်များကို Save A Train တွင်ဝယ်ပါ
Save A Train သည်ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရထားလက်မှတ်အများဆုံးဝယ်ယူမှုများရှိသည်, ငါတို့၏အစွမ်းသတ္တိဖြစ်သောကြောင့်၊, ကျနော်တို့စျေးအသက်သာဆုံး Eurostar လက်မှတ်တွေကိုရှာပါ. မီးရထားအော်ပရေတာများနှင့်ရင်းမြစ်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာ algorithms သည်သင့်အားအမြဲတမ်းဈေးအသက်သာဆုံး Eurostar လက်မှတ်များပေးလေ့ရှိသည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် Eurostar အတွက်အခြားနည်းလမ်းများကိုလည်းရှာဖွေနိုင်သည်.
လက်မှတ်စျေးနှုန်းများသည်ပရိုမိုးရှင်းအချိန်တွင်ယူရို ၃၅ မှစတင်နိုင်သော်လည်းနောက်ဆုံးမိနစ်တွင်ယူရို ၃၁၀ အထိရောက်ရှိနိုင်သည်. Eurostar စျေးနှုန်းများ သင်ရွေးချယ်သောအတန်းပေါ်မူတည်သည်. London-Paris အတွက်အတန်းအစားတစ်ခု၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းများ၏အကျဉ်းချုပ်ဇယားကိုကြည့်ပါ / လန်ဒန် - ဘရပ်ဆဲလ် / လန်ဒန် - အမ်စတာဒမ်ခရီးစဉ်:
စံ 35 € – 190 € 68 € – 380 €
စံပရီးမီးယားလိဂ် 96 € – 290 € 190 € – 490 €
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပရီးမီးယားလိဂ် 310 € 600 €
Eurostar ရထားစီးတာဘာကြောင့်ပိုကောင်းတာလဲ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးမသွားရ?
1) Eurostar ခရီးသွားခြင်း၏အားသာချက်မှာသင်သွားသောမည်သည့်မြို့မဆိုရှိမြို့လယ်သို့တိုက်ရိုက်သွားပြီးဖြစ်သည်, ဒီဟာရထားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်တယ်, သငျသညျပဲရစ်ကနေခရီးသွားလေ့ကျင့်လျှင်, ဘရပ်ဆဲလ်, အမ်စတာဒမ်, ရိုတာဒမ်, Antwerp, Lille သို့မဟုတ် London သည် Eurostar အတွက်အဓိကအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်. ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာ Eurostar စျေးနှုန်း, ပုံမှန်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်. အချို့သောပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကသင်သည် Eurostar စျေးပေါသောလက်မှတ်များကိုရနိုင်သည်. ဒါပေမယ့်ထွက်ခွာသွားမတိုင်မီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ၌, စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာနေကြသည်. သင်ချောချောမွေ့မွေ့ခရီးသွားလာကြိုက်နှစ်သက်ပါ, Eurostar ကမင်းအတွက်ပါ!
2) လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားခြင်းတွင်လေဆိပ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသည်, ဆိုလိုတာကတော့အနည်းဆုံးဖြစ်ရမယ်2သင်၏စီစဉ်ထားသောထွက်ခွာခြင်းမပြုမီနာရီ, Eurostar နဲ့အတူမင်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ် 1 ကြိုတင်နာရီ. လည်း, မြို့လယ်ခေါင်ကနေလေဆိပ်ကိုသွားရတော့မယ်. ဒီတော့မင်းကခရီးအကုန်လုံးကိုရေတွက်မယ်ဆိုရင်, Eurostar သည်စုစုပေါင်းခရီးသွားချိန်တွင်အမြဲအနိုင်ရရှိသည်.
3) တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရထားဈေးနှုန်းသည်လက်မှတ်လေယာဉ်ပေါ်တွင်လေယာဉ်ပျံထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်, ဒါပေမယ့်နှိုင်းယှဉ်ပါဝင်သည်သငျ့သညျ, မည်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကိုမဆိုလေဆိပ်သို့ပို့ဆောင်ရန်သင့်အတွက်မည်မျှကုန်ကျသည်, မှတပါးအချို့ကိစ္စများ မှလွဲ၍ သင်အချိန်ပိုရနိုင်သည် Eurostar အားဖြင့်ခရီးသွားလာ, နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Eurostar နဲ့အတူသင့်မှာခရီးဆောင်အိတ်မပါပါဘူး.
4) လေယာဉ်ပျံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်အဆင့်တွင်, ရထားတွေရှိတယ် ပိုပြီးပတ်ပတ်လည်ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ, နှင့်သင်ခရီးသွားလေ့ကျင့်ဖို့လေယာဉ်ကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်, ရထားခရီးသွားခြင်းသည်လေယာဉ်ထက်ကာဘွန်ညစ်ညမ်းမှု၏ ၂၀ ဆလျော့နည်းသည်.
Standard အကြားခြားနားချက်များကဘာတွေလဲ, စံပရီးမီးယားလိဂ်, နှင့် Eurostar အပေါ်စီးပွားရေး Premier?
Eurostar ရထားများမှာမည်သည့်ဘတ်ဂျက်အတွက်မဆိုတည်ဆောက်ရန်လူတန်းစားဝန်ဆောင်မှုများစွာရှိသည်, နှင့်ခရီးသွားမဆိုအမျိုးအစား, မင်းဟာစီးပွားရေးခရီးသွားတစ် ဦး လား၊
စံ Eurostar လက်မှတ်တွေ:
အဆိုပါ Eurostar စံလက်မှတ် ရရှိနိုင်သည့်နှုန်းထားအားလုံးတွင်အသက်သာဆုံးဖြစ်သည်. ဒီရထားလက်မှတ်ကိုကြိုတင်မှာယူတာအကောင်းဆုံးပါပဲ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စံလက်မှတ်တွေအနိမ့်သောစျေးနှုန်း၏ – သူတို့မြန်မြန်ရောင်း. စံလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသောခရီးသွားများသည်ယူနိုင်ပါသည်2သေတ္တာ + 1 ခရီးဆောင်အိတ်များကိုအခမဲ့. Standard Eurostar လက်မှတ်များမှခရီးသည်များသည်အခမဲ့ WiFi နှင့်ထိုင်ခုံရွေးချယ်မှုကိုခံစားနိုင်သည်. စံလက်မှတ်များကိုအများအားဖြင့်ပြန်အမ်းမရကြသည်.
ပရီးမီးယားလိဂ် Standard Eurostar လက်မှတ်တွေ:
ဒီလက်မှတ်အတန်းဟာ Standard Eurostar လက်မှတ်အမျိုးအစားထက်ပိုပြီးစျေးကြီးသည်, အဆိုပါ ပရီးမီးယားလိဂ်စံလက်မှတ် နောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း. ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ရေးသားခဲ့သော Standard လက်မှတ်များ၏အားသာချက်များအပြင်, ပရီးမီးယားလိဂ်စံလက်မှတ်များသည်နေရာထိုင်ခင်းပိုမိုများပြားသည့်ထိုင်ခုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်, ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မဂ္ဂဇင်းများနှင့်သတင်းစာများကိုအခမဲ့ပေးသည်, သင်သည် Eurostar ပေါ်ရှိသင်၏စားသောက်ခန်းသို့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအစားအစာနှင့်သောက်စရာများကိုရရှိသည်. ပရီးမီးယားလိဂ်စံလက်မှတ်များကိုသင်၏ခရီးစဉ်ပေါ် မူတည်၍ အခကြေးငွေဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်.
စီးပွားရေးပရီးမီးယားလိဂ် Eurostar လက်မှတ်များ:
အဆိုပါ Eurostar စီးပွားရေး Premier လက်မှတ် ၀ ယ်သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားခဲ့သည့်အားသာချက်အားလုံးကိုခံစားနိုင်သည်, Eurostar Business Premier မှခရီးသည်များအကျိုးခံစားရမည်3အိတ်အိတ်များအစား 2, နာမည်ကြီးစားဖိုမှူး Raymond Blanc မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံအပူမီနူးတစ်ခု, Business Premier ၏ခရီးသည်များသည်ရထားပေါ်သို့လန်ဒန်သို့သို့မဟုတ်လန်ဒန်မှမထွက်ခွာမီတည်းခိုနိုင်သည်, ထို့အပြင်အထူးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုသာ 10 သူတို့အတွက်သာမိနစ်နှင့်တက္ကစီကြိုတင်မှာကြားပေးခြင်း. အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဤအမျိုးအစား Eurostar Business Premier Train လက်မှတ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခရီးသွားလာခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်: သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သည်, သင်၏ထွက်ခွာခြင်းမပြုမီသို့မဟုတ် 60 သင်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ရက်ပေါင်း, အားလုံးအပိုဆောင်းအခကြေးငွေမှာအားလုံး.
အဘယ်သူမျှမ, နှင့်ဆန့်ကျင်ပေါ်, Eurostar ကို Point to Point လက်မှတ်များဖြင့်သာပံ့ပိုးထားပြီးမည်သည့်ခရီးသွားဖြတ်သန်းမှုမှမထောက်ခံပါ, ဒါပေမယ့် Eurostar နဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် Eurostar Club ကိုဝင်နိုင်ပါတယ်, ဒီရထားခရီးသွားမှတ်ကိုစုဆောင်းရန်သင့်အားကမ်းလှမ်းသောသစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့မှသာသင်သည်ဤအချက်များကိုလက်မှတ်များသို့မဟုတ်အထူးလျှော့စျေးများသို့ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းနိုင်သည်. သင်ဝင်ငွေ 1 သင်သုံးစွဲခဲ့တဲ့£ 1 တိုင်းအတွက်အမှတ်ပေးပြီးဒီအချက်တွေကသင့်ကိုအထူးအခွင့်အရေးတွေရစေတယ်:
– မှ 200 မှတ်: သင် Eurostar လက်မှတ်တွေကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာရပါတယ်.
– သင်ရလျှင် 500 မှတ်: မင်းရနိုင်တယ် 1 ရထားဝန်ဆောင်မှုအဆင့်မြှင့်.
– တဖန်သင်တို့ရောက်ရှိရန်နိုင်လျှင် 1,000 မှတ်: သင်ရွေးနုတ်နိုင်သည် 1,000 အားဖြင့်တစ်လှည့်လည်ခရီးစဉ်မှအချက်များ လန်ဒန်သို့ Eurostar အနောက်တိုင်းဥရောပဘယ်နေရာမှာမဆို.
သင်၏ Eurostar ကိုရယူရန်နှင့်အချိန်မှန်ရရန်, သင်အနည်းဆုံးရောက်ရှိရန်ရထားလမ်းကအကြံပြုသည် 1 သင်၏ Eurostar ရထားမထွက်ခွာမီတစ်နာရီ. ကျွန်ုပ်တို့သည် Save A Train ၌ကျွန်ုပ်တို့ Eurostar ၏ရထားများပေါ်တွင်ခရီးများစွာထွက်ခဲ့ပြီးဤအချိန်သည်လုံလောက်သောအချိန် ဖြစ်၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုတန်းစီသည်ကြာရှည်မသွားနိုင်ပါ။, သင်ဆိုင်များကို ၀ မ်းသာခံစားနိုင်ပြီးသင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုလည်းရနိုင်သည် တတ်နိုင်သမျှချောမွေ့ဖြစ်ရထားခရီး.
လန်ဒန် Moutiers ရထားမှ
လန်ဒန် Bourg စိန့်မောရစ်ရထားမှ
ဤသည်မှာခက်ခဲသောမေးခွန်းဖြစ်ပြီး Save A Train သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြေဆိုနိုင်သည့်မေးခွန်းဖြစ်သည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာသို့သွားပြီးသင်၏မူလနှင့် ဦး တည်ရာကိုရိုက်ထည့်ပါ, သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှန်ကန်သောရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Eurostar ရထားအချိန်ဇယား ရှိပါတယ်, ရထားတွေရှိတယ်7နံနက်ယံ၌9ည ဦး ယံ၌ Eurostar လမ်းကြောင်းများနှင့်ပါရီ - လန်ဒန်သို့လန်ဒန်သို့မဟုတ်ပါရီသို့အများဆုံးသိမ်းပိုက်ထားသောလမ်းကြောင်းများသို့သွားပါ, မင်းနာရီဝက်ဝက်နာရီတိုင်း Eurostar ရထားရှိတယ်, သင်၏ခရီးစဉ်အတွက်အဆင်ပြေမည့်မှန်ကန်သော Eurostar လက်မှတ်ကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်.
London မှ Antwerp ရထားလက်မှတ်
လန်ဒန် - ရော့တာဒမ်ရထားလက်မှတ်
ဒစ္စနေးလန် Marne-la-Vallee သို့လန်ဒန်ရထားလက်မှတ်
လန်ဒန်မှ Lille ရထားလက်မှတ်
ဘယ်ဘူတာများကို Eurostar မှတာဝန်ယူသည်?
Eurostar အတွက်ပဲရစ်ရထားဘူတာကိုနာမည်ပေးထားသည် ပဲရစ် Gare du Nord, မီးရထားဘူတာရုံသည်ပါရီမြို့၏ ၁၀ ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်, ဘာလဲ +-30 Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှမိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရသည်. Eurostar ယူဖို့, မင်းဘူတာကိုဝင်ပြီးတက်ရမယ် 1 ဘူတာရုံအလယ်၌တည်ရှိသည့်စက်လှေကားသုံးပြီး Gare du Nord အတွင်းရှိကြမ်းပြင်.
Disneyland Paris မှာ, Eurostar ဘူတာရုံရောက်ရှိ Marne, La Vallee Chessy, အရာတည်ရှိသည်5Disneyland အပန်းဖြေစခန်းနှင့် Disneyland ဟိုတယ်များမှမိနစ်အနည်းငယ်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်. ဘူတာရုံထဲမှာဘယ်ဘက်အိတ်သိုလှောင်ရုံတစ်ခုရှိပြီးမင်းရဲ့အဖိုးတန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်မပူပါနဲ့ပန်းခြံမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားနိုင်ပါတယ်.
လန်ဒန်မှာ, ယနေ့ခေတ် Eurostar ရထားများသည်ထွက်ခွာ။ ရောက်လာသည် စိန့်ပန်ကရက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘူတာ, လန်ဒန်မြို့အလယ်ပိုင်း၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်. ရှေ့မှာ 2007, Eurostar ရထားများသည်လန်ဒန်ရှိ Waterloo ဘူတာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်.
အဆိုပါ ဘရပ်ဆဲလ် Midi-Zuid (ဘရပ်ဆဲလ်တောင်) ဘူတာရုံသည်ဘရပ်ဆဲလ်အလယ်၌တည်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သင်လိုအပ်ကြောင်းနားလည်အောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ ဘရပ်ဆဲလ် Midi-Zuid နှင့်မဘရပ်ဆဲလ်ဗဟိုဘူတာ, ဘရပ်ဆဲလ် Midi-Zuid ရထားဘူတာရှိတယ် 22 ပလက်ဖောင်းများကိုလေ့ကျင့်, နှင့် Eurostar လက်မှတ်ရုံးပလက်ဖောင်းအနီးတွင်တည်ရှိသည် 8. Eurostar ရထားလက်မှတ်သည်သင့်အားဘရပ်ဆဲလ် Midi Zuid နှင့် Brussels Central တို့အကြားလွတ်လပ်စွာခရီးသွားလာခွင့်ပြုသည်.
အမ်စတာဒမ် Centraal (အမ်စတာဒမ်ဗဟိုစခန်း) အမ်စတာဒမ်မြို့လယ်တွင်မြစ်၏ဘေးတွင်တည်ရှိသည်, သင်ဘူတာရုံကထွက်တဲ့အချိန်မှာ, အမ်စတာဒမ်ပင်မလမ်းသည် Madame Tussauds ကဲ့သို့သောဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအနီရောင်ခရိုင်တွင်လည်းမတွေ့ရပါ. များစွာသောဥရောပရထားလမ်းဘူတာများတွင်ရှိသကဲ့သို့, သင့်မှာခရီးသွားချင်တယ်ဆိုရင်စောစောစီးစီးဖွင့်ပြီးအိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အိတ်သိုလှောင်ရုံတွေရှိတယ် 1 သင်၏ဟိုတယ်တွင်နေ့လည်စာစားနိုင်သည်.
Lille မှာ, သင်မှာ .... ရှိသည်2တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိပ်မဝေးတဲ့ရထားဘူတာ, ဒါပေမယ့်သင်သတိရရမယ် Lille ရှိ Eurostar terminal, ဖြစ် Lille ဥရောပ မ Lille ဖလန်းဒါးစ်, သင်ဤအမှားလုပ်ဖို့ဒီလွယ်ကူအောင်လုပ်ရင်တောင်, ဘူတာရုံများ5တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မိနစ်ခွဲခြားကြသည်.
Antwerp ဗဟိုဘူတာ သင်ဘယ်လ်ဂျီယံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ Antwerp ရှိ Eurostar သို့ရောက်ရှိသည်, သင် Antwerp ကနေခရီးသွားလာလျှင်, သင်အမှန်တကယ်အကြံပြုထားသည်ထက်ပိုရှည်ဘူတာရုံသို့လာရန်အကြံပြုပါသည် 1 ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထွက်ခွာမီနာရီ မီးရထားဘူတာရုံသည်အလှဆင်ခြင်းအတွက်ဆုများရရှိခဲ့သည် နှင့်ဗိသုကာကရှိပါတယ်5ကြမ်းပြင်နှင့်၎င်း၏အတွက်သွားလာရန်အလွန်ကောင်းတဲ့.
Rotterdam မှနှင့်မှခရီးသွားတဲ့အခါ, သင်အသုံးပြုလိမ့်မည် ရော့တာဒမ်ဗဟိုဘူတာ သို့မဟုတ်၎င်း၏ဒတ်ခ်ျနာမ၌ Rotterdam Central, ဒီရထားဘူတာဟာအတွင်းပိုင်းကဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုလိုတည်ဆောက်ထားတာပါ, ဒါကြောင့်မင်းမတိုင်ခင်နှင့်ပြီးနောက်တွင်ကောင်းမွန်သောစျေးဝယ်ခြင်းကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားနိုင်သည် Eurostar ခရီး.
ငါ Eurostar အပေါ်ငါနှင့်အတူယူဆောင်လာသင့်တယ်?
သင်၏ Eurostar ခရီးစဉ်သို့သင်ကိုယ်တိုင်ရောက်ရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်, သို့သော်ထိပ်တွင်သင်သည်သင်၏ Eurostar ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းကိုသင်နှင့်သေချာအောင်လုပ်သင့်သည်, အခြားမဖြစ်မနေရရှိရမည်မှာတရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းဖြစ်သည် ခရီးသွားအာမခံရှိသည်.
Eurostar ကိုပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ, Eurostar International Limited ကိုမအံ့သြသင့်ပါ, 55% SNCF ကပိုင်ဆိုင်သည်, 30% ကနေဒါ CDPQ, 10% ဖက်ဒရယ် Hermes နှင့်ကျန်ကျန်ဘယ်လ်ဂျီယံရထားလမ်းပိုင်, SNCB.
Eurostar မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ Eurostar နဲ့ဘယ်ကိုသွားရမလဲ?
အပြင်ပဲရစ်ကနေ, လန်ဒန်, အမ်စတာဒမ်နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်, ရိုတာဒမ်, နှင့် Lille, Eurostar သည်ရာသီအလိုက်လိုင်းများကိုလည်းလည်ပတ်သည်. နွေရာသီကာလအတွင်း, ဇူလိုင်လနှင့်စက်တင်ဘာလအကြား, အချို့ Eurostar ရထားများသည် Avignon နှင့် Marseilles သို့တိုက်ရိုက်သွားသည်, ဆောင်းရာသီလအတွင်းနေစဉ်, ဒီဇင်ဘာလနှင့်Aprilပြီလအကြား, Eurostar ၏ရထားများသည်အဲလ်ပ်တောင်ရှိနှင်းလျှောစီးဒေသများဖြစ်သော La Plange ကဲ့သို့သောနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများသို့သွားရန်အဓိကမြို့များဖြစ်သော Moutiers သို့မဟုတ် Bourg St Maurice ကဲ့သို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်, သူတို့ရွေးချယ်ခြင်း, Tignes နှင့် Val Thorens.
သင်ဘူတာရုံနှင့်သတ်မှတ်ထားသောareaရိယာကိုရောက်တဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏ Eurostar ရဲ့လက်မှတ် scan, ယနေ့ခေတ်တွင်လူများသည် QR ကုဒ်ကိုအသုံးပြုလိုကြသည်, သို့သော်သင်နှင့်သင်၏ရထားလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုသင်နှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်, ပြီးရင်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ရပါမယ် (အရာလေဆိပ်ထက်အများကြီးပိုမြန်ဖြစ်ကြသည်), နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုကိုသွားပြီးနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပါ။ ပြီးတော့သင့်ရထားဆီသွားပြီး၊ သင့်မှာဆိုင်များစွာသို့မဟုတ် Eurostar Lounge များရှိသည်။, အောက်ပါဗီဒီယိုတွင်သင်၏ Eurostar ရထားသို့မရောက်မှီရထားဘူတာသို့ရောက်ချိန် မှစ၍ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုသင်တွေ့နိုင်သည်.
https://www။youtube။com/watch?v = Jtx0k4Jw7f4
Eurostar မှာဘာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးမလဲ?
Eurostar ရထားများပေါ်တွင်အချိုရည်များနှင့်ပေါ့ပါးသောအစားအစာများကိုရည်ရွယ်သည့် Eurostar ရထားပေါ်တွင်နေရာရှိသည်, မီနူးတွင်အသားညှပ်ပေါင်ပါဝင်သည်, ချောကလက်ချစ်, မုန်, ချောကလက်အရက်ဆိုင်, ကော်ဖီ, ပူပြင်းသည့်ချောကလက်သို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဤစားသောက်ဆိုင်မီးရထားလမ်း၌စားသောက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ဝယ်ယူသောအရာကိုသင်၏ထိုင်ခုံသို့ပြန်ယူနိုင်သည်. Eurostar ၏ရထားများပေါ်တွင်သင်၏ထိုင်ခုံဘေးတွင် power slot များကိုသုံးနိုင်သည်.
လန်ဒန်စိန့်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ. Pancras International ကို Eurostar ရထားနဲ့သွားမယ်?
လန်ဒန်ရှိတိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ဝသကဲ့သို့, St Pancras အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘူတာသို့ရရန်လန်ဒန်မြေအောက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ကွဲပြားခြားနားသောမြေအောက်လိုင်း ၆ ခုသည် Kings Cross ဘူတာသို့ရောက်ရှိပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင်စိန့်ပန်ကရက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလမ်းလျှောက်လျှင်သင်ခြေလျင်လျှောက်နိုင်သည်. လန်ဒန်တောင်ဘက်မှလာလျှင် London St Pancras International သည် Euston ရထားဘူတာမှမိနစ်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်.
လန်ဒန်နှင့်အမ်စတာဒမ်အကြား Eurostar ရထားကိုစီးလို့ရသလား?
Aprilပြီလကတည်းက 2018, Eurostar အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, လန်ဒန်နဲ့အမ်စတာဒမ်ကိုအလည်သွားနိုင်တယ် 3-4 နာရီ, Eurostar အချို့သည်လန်ဒန်မှအမ်စတာဒမ်သို့ရထားများရှိသော်လည်းနှင့်ဘရပ်ဆဲလ်တွင်ရထားပြောင်းရန်မလိုအပ်ပါ, ဘရပ်ဆဲလ်မှာရပ်, သို့သော်၎င်းသည်သင်ဝယ်သော Eurostar လက်မှတ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်.
အများဆုံးတောင်းဆိုထားသော Eurostar မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ – Eurostar မှာထိုင်ခုံကြိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားရန်လိုပါသလား?
သင် Eurostar ရထားလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါ, သင်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်သည့်အခါသင့်အားထိုင်ခုံတစ်ခုကိုအလိုအလျောက်ပေးလိမ့်မည်. မင်းရထားပေါ်မှာထိုင်ခုံတွေလွတ်မယ်ဆိုရင်, သင်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားအာကာသရှိသည်ဖို့ပတ်ပတ်လည်ကိုရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်.
Eurostar ထဲမှာ WiFi အင်တာနက်ရှိလား?
သင်ပျော်ရွှင်နိုင်သည် Eurostar ရထားအားလုံးမှာအခမဲ့ WiFi အင်တာနက် Eurostar လက်မှတ်များကိုကြိုတင် ၀ ယ်သည့်အခါနှင့်ခရီးသွားသင်တန်းများအားလုံး.
သင်ဤဝေးရောက်ရှိလျှင်, သင်၏ Eurostar ရထားများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုသင်သိပြီးသင်၏ Eurostar ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူရန်အဆင်သင့်ရှိသည် SaveATrain.com
ဤစာမျက်နှာကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ embed လုပ်ချင်ပါသလား? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း), ဒါမှမဟုတ်ဒီစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်.
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml နှင့် / pl သို့ / nl သို့မဟုတ် / fr နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်.